Magaalooyinka ugu qurxoon qarniyadii dhexe Yurub | Safarka Absolut
The magaalooyinka ugu quruxda badan qarniyadii dhexe ee Europe
Lugaha Alberto | | Alemania, Espana, Francia, Italia
Dadka taariikhda jecel waxay helayaan xilligii dhexe, ama ka mid ahaanshaha qarniyadii dhexe, mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan markay tahay ku raaxeysiga maalin dalxiis dhaqameed. Haddii tani ay tahay kiiskaaga, markaa hubaal waad u raaxeysan doontaa sida ilmo oo kale iyada oo loo marayo kuwan magaalooyinka ugu quruxda badan qarniyadii dhexe ee Yurub.
1 Carcassonne (Faransiis)
3 Ávila (Isbaanish)
4 Siena (Talyaani)
5 Nuremberg (Jarmalka)
8 Edinburgh (Iskotland)
Waxaa loo arkaa mid ka mid ah magaalooyinkii ugu qadiimsanaa ee YurubCarcassonne waxay ku taalaa koonfurta Faransiiska, gaar ahaan gobolka Occitania, iyadoo soo bandhigaysa awood ka bilaabmi doonta darbigeeda balaaran, kaas oo qaabeeya Citadelkeeda caanka ah. Albaabka laga soo galo khuraafaadka Albaabka NarbonneTrickku waa inuu ku lumo shabakad labyrinthine luuqyo ah oo muujisa astaamo sida Comtal castle, oo u qalma filim Disney, ama Cathedral of St. Nazaire. Dhismo adag oo webiga Aude ka go'an oo loo qoondeeyey Dhaxalka aadanaha by unesco Sannadkii 1997 oo aadan seegi karin haddii ay arrintaadu tahay inaad dib ugu soo noqoto safarkaaga dalxiis.
Booqashada waajibka ah ee aad ku marayso caasimada Brussels, Bruges (magaceeda asalka ahi yahay Bryggia, ama "buundooyinka", iyada oo la tixraacayo tirada dhismayaasha webiga ee ay leedahay), waa wax lagu farxo dareenka. Magaalo lagu dhawaaqay Dhaxalka Dunida oo dhashay qarnigii XNUMXaad taas oo, inkasta oo ay isbeddel, haddana loo beddelay qaabka neo-gothic qarnigii XNUMXaad si loo ixtiraamo guud ahaan bilicda magaalada hore. Ha ka maqnaan booqasho quraafaad ah Munaaradda dawanka Belford ama Cathedral of Badbaadiyaha ka hor inta aan la raacin doon oo lagu lumin kanaallada badan ee ka gudba wax yar "Venice of the North".
Dhinacyada wabiga Adaja, Ávila waxay sii wadaa inay sare uqaaddo maqaamkeeda inay tahay magaalo qadiimi ah oo dalkeena ka mid ah oo aan muran lahayn. 1131 mitir sare, jago siineysa xitaa dabeecad aad u tiro badan. Waxaa degan Rome, Visigoths iyo Muslimiin ilaa ay ka guuleystaan ​​Masiixiyiintii qarnigii XNUMXaad, Ávila waxay ahayd meel muhiim ah oo xajka lagu tago qarnigii XNUMXaad iyada oo ay ugu wacan tahay joogitaanka Saint Teresa ee Ciise, oo sii kordhin doona awoodda magaalo lagu qeexay derbigeeda weyn, kan ugufiican Spain. Gudaha gudahiisa, ma jiraan wax ka fiican sida loo riyaaqo astaamaha sida weyn, Gothic cathedral iyo kan ugu da'da weyn qaabkan, iyo sidoo kale astaanta caanka ah ee 'Plaza del Mercado Chico' ama Kaniisadda San Pedro.
Sharafta Tuscany waxay Siena ka heshay safiirkii qarniyadii dhexe ee ugu fiicnaa Talyaaniga oo dhan. Magaalo ku meerto a Piazza del Campo halkaas oo mar la qabtay tartamadii caanka ahaa ee Palio, isla markaana aragtidiisa guud ay ka mid tahay dhismayaasha sida Torre del Mangia, kan ugu sarreeya magaalada, ama kacdoonka Qasriga Dadweynaha. Magaalo duug ah oo macaan halkaasoo waswaasiyo waqti kale wali la neefsaday taasna ay lama huraan inoo tahay inay noo horseedo caankeeda Duomo, oo sidoo kale loo yaqaan Cathedral of Santa María de la Asunción, ayaa ku dhawaaqay Goobta Dhaxalka Adduunka oo ku habboon in la dhex galo shaqooyin kala duwan oo uu sawiray Michelangelo.
Waxaa loo tixgeliyaa sida magaalada labaad ee ugu weyn Bavaria oo ka dambeysa Munich, Nuremberg waa jawharad casri ah oo mar martigelisay boqortooyada ugu caansan Boqortooyadii Quduuska ahayd ee Roomaanka. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu aragtida dheer taariikhda sidii lagu tixgeliyey Magaaladii ugu horeysay ee Bilaash ah Sannadkii 1219, Nuremberg maanta waa muuqaal qurux badan oo laga bartay taariikhdiisii ​​hore iyada oo ay ugu wacan tahay magaalo ficil ahaan jirtey oo ku wareegsan derbi shan kiilomitir ah. Gudaha waxaad ka heli kartaa astaamo ay ka mid yihiin Kaiserburg, ama qasriga boqortooyada, yaa leh Sinwellturm (ama Torre del Pecado) waxay bixisaa aragtiyo aan laga adkaan karin, dhex mushaaxa jidadkeeda guryaha cirfiidowga Yurub ama hoy ka dhigato Buundada fuliyaha webiga Pegnitz.
Wadanka shukulaatada wuxuu kahelaa Bern mid kamid ah sanbabada qarniyadii dhexe ugu fiicnaa Yurub. Magaalo uu maro webiga Aare oo sameeya faraanti ku wareegsan magaaladeedii hore, farxad run ah ayaa loogu talagalay inay noqoto Goobta Dhaxalka Adduunka ee 1983 oo ku hareeraysan meelaha caanka ku ah sida caanka ah munaaradda saacadda, oo la dhisay intii u dhaxaysay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad, arcadooyinka (ama taxadarka arches) ee ka kooban qayb ka mid ah qaab-dhismeedkeeda, ilaha ay jecel yihiin ama a cathedral qaabka gothic ka dhashay macbad Romanesque duug ah. Dabcan, cunista shukulaatada caadiga ah inta aad ku lumaysid jidadkeeda waa waajib ka badan soo jeedin. Shaki la'aan, mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan qarniyadii dhexe ee Yurub.
Sida wax ka soo baxay buuggii hore ee Norse, caasimada Estoniya waa mid ka mid ah magaalooyinka qadiimiga ah ee Yurub dhexdeeda, gaar ahaan bilaha jiilaalka marka barafku daartiisa iyo jidadkeeda u rogo goob u gaar ah. Isaga oo fiirinaya Gacanka Finland, Tallinn wuxuu u muuqday deked ganacsi oo duug ah illaa ay ka noqotay xarun neerfayaasha intii lagu jiray qarniyadii dhexe, xaalad ka jirta Magaalada qadiimiga ah oo loo qaybiyay laba meelood: Vanalinn, qaybta hoose, iyo Toompea, qaybta sare. Qaybaha ay ka kooban tahay magaalo derbiyeed qadiimiga ah oo ay ku jirto magaceeda Barxadda Magaalada iyo Taallada Magaalada, ka Albaabka Viru gudbeen laba munaaradood oo waaweyn ama qaansoleydii oo ka kooban Marinka Santa Catalina, halbowle xuub leh oo martida geeya adduunyo qarsoodi ah, oo gaar ah.
Waxay ka kooban tahay laba qaybood oo ay u kala baxaan jardiinooyinka Princess Street (magaalo duug ah oo ku taal qalcaddii qarniyadii dhexe, iyo mid cusub oo laga sameeyay qarnigii XNUMXaad), Edinburgh waa caasimadda weyn ee boqortooyada Ingiriiska. Magaalo ay ku taal astaanta ugu weyn qalcaddiisa, oo laga heli karo Calton Hill, marka lagu daro meelaha kale sida Wadaadka Santa Margarita, dhismaha ugu da'da weyn magaalada, ama Royal Palace, Markhaatiga ugu wanaagsan ee hantida iyo dahabka ee qoysaska kala duwan ee taajka Scottish-ka. Sida xiisaha leh, waxaad sidoo kale heli doontaa qaybta nuqul ka mid ah Parthenon-ka Giriigga ah oo aan waligeed la dhammeynin miisaaniyad la'aan, awood u leh inuu helo 12 tiirar.
Midkee magaalooyinkan ugu quruxda badan qarniyadii dhexe ee Yurub ayaad jeceshahay inaad ku lumiso? Ma booqatay midkoodna?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » The magaalooyinka ugu quruxda badan qarniyadii dhexe ee Europe
Maxaa lagu arkaa Biarritz